महँगा छैनन नेपालका पाँच तारे होटल, एकरात बसेको कति लाग्छ ? – Medianp
महँगा छैनन नेपालका पाँच तारे होटल, एकरात बसेको कति लाग्छ ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २३, २०७५१०:०८0
काठमाडौंः धेरैलाइ चासो हुन सक्छ नेपालको पाँच तारे होटलमा एकरातको कति रकम तिर्नुपर्छ ? तर तपाइ हामीले सोचे जस्तो महंगो भने छैन। नेपालको पछिल्लो समय पाँच तारे होटल क्रम समेत बढेको छ ।
हाल नेपालमा १० वटा पाँच तारे होटल रहेको भएपनि दुईवटा बन्द रहेको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक मध्ये धेरै खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको बसाई प्रायः पाँच तारे होटलमै हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालीहरु पनि कार्यक्रमहरु पाँच तारे होटलमा बढी गर्ने गरेका छन् । सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटलमा एक रातको कति मूल्य पर्छ भन्ने चासो सवैमा हुने गरेको छ । पाँच तारे होटल जस्तै बढी लगानी गरेर खोलिएका सुविधा सम्पन्न रिसोर्टहरु महंगा र सुविधायुक्त रहेका छन् । यी हुन सुविधासम्पन्न पाँच तारे होटल :
क्राउन प्लाजा काठमाडौं सोल्टी
नेपालमा सवैभन्दा राम्रो र सुविधासम्पन्न पाँचतारे होटलको सूचीमा रहेको क्राउन प्लजा सोल्टी काठमाडौंको कालीमाटीमा रहेको छ । नेपालमा आउने ठूला भीभीआइपीहरु बस्नको लागि बढी प्रयोग हुने उक्त होटलमा विश्वमा पाइने सवै प्रकारका सेवा सुविधाहरु रहेका छन् ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ त्यहाँ बस्न सकिदैन । तर सोल्टी होटलमा पनि एकरातको १३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ तिर्ने हो भने बस्न सकिन्छ । सवैभन्दा सस्तो रुम १३ हजा ३ सय ४५ बाट सुरु हुने उक्त होटलमा ५० हजार पर्ने रुमसमेत रहेको छ ।
साँग्रिला होटल काठमाडौं:
काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको साँग्रिला होटल पाँच तारे सुविधासम्पन्न होटल हो । सदाबाहार पर्यटकले भरिभराऊ हुने उक्त होटल पनि सवै प्रकारका सुविधाहरु पाउन सकिन्छ । साँग्रिला होटलमा एकरातको १२ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ प्रतिरातको तिर्नुपिर्ने हुन्छ ।
होटल एक एन्ड यति:
काठमाडौंको दरबार मार्गमा अवस्थित होटल याक एन्ड यति होटल चर्चित पाँच तारे होटल हो । सवै सेवा सुविधासम्पन्न होटल पर्यटकले सदाबहार भरिभराऊ हुने गर्दछ । होटलमा पर्यटकले १३ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ रुम पाउने छन् ।
¥याडिसन होटल काठमाडौं:
लाजिम्पाट स्थित ¥याडिसन चेन होटल हो । सवै सेवा सुविधासम्पन्न रहेको उक्त होटलमा पर्यटकको लागि १२ हजार १ सय १८ रुपैयाँ पर्दछ ।
हायत रिजेन्सी होटल, काठमाडौं:
हायत रिजेन्सी होटल काठमाडौंको बौद्धमा रहेको छ । पर्यटकको लागि एक रातको १८ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ पर्दछ । नेपालकने लक्जरी होटलको सूचीमा रहेको हायत रिजेन्सी पनि चेन होटल हो ।
होटल अन्नपूर्ण काठमाडौं:
दरबार मार्गमा रहेको होटल अन्नपूर्ण होटल पाँच तारे होटल हो । सुविधासम्पन्न उक्त अन्नपूर्ण होटलमा पर्यटकलाई एकरातको १२ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ रहेको छ ।
होटल मल्ल :
काठमाडौंको ठमेलमा रहेको पाँच तारे होटल मल्ल सुविधासम्पन्न होटल हो । सदाबाहार भरिभराउ हुने उक्त होटल मा पर्यटकका लागि सवै सेवा सुविधा उपलव्ध रहेका छन् । पर्यटको लागि एकरातको १९ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ रहेको छ ।
होटल ग्रान्ड पोखरा:
पाँच तारे होटल ग्रान्ड पोखराको एक मात्र पाँच तारे होटल होटल हो । फुलबारी होटल बन्द भएपछि पोखारामा एउटा मात्रै पाँच तारे होटल रहेको छ । काठमाडौंबा पाँच तारे भन्दा केही सस्तो रहेको भएपनि सुविधाका हिसावले पर्यटक लोभ्याउने रहेको छ । होटलको एकरातको पर्यटकका लागि ७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ रहेको छ ।
‘ससुराल सिमरका’की सिमरलाई जन्मदिनमा श्रीमानले दिए यस्तो सरप्राइज
पोखराकी एक मात्र महिला ट्याक्सी चालक विष्णु कुँवर, जो यात्रुको पहिलो रोजाइमा पर्छिन्
सरकार चलाएको एक वर्ष पूरा गरेकोमा अमेरिकाले दियो प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई (विज्ञप्ति)